10 Cunto Oo Ilaaliya Caafimaadka Iyo Quruxda Maqaarka Jirka - Daryeel Magazine
10 Cunto Oo Ilaaliya Caafimaadka Iyo Quruxda Maqaarka Jirka
Shukulatada madow: Shukulaatada madow waxa ay qani ka tahay antioxidants iyo fatty acids oo xoojiya korriinshaha maqaarka. Antioxidants ka ku jira shukulaatada madow waxa uu hoos u dhigaa qalleylka maqaarka kana hortagaa inay waxyeeleyso qorraxda. Sidoo kale cocoa oo inta badan lagu daro shukulaatada waxa uu dabciyaa xididada dhiigga isla markaana siyaadiyaa wareegga dhiigga taasoo keeneysa maqaar fayaaw. Haddaba haddii aad iibsaneyso shukulaatada madow iibso mid ay ku jirto cocoa ugu yaraan 80% si aad uga fogaato kuwa lagu daro caanaha iyo sokorta.
Akhriso: 9 faaido oo laga helo kalluunka Salmon
Koostada: waxa ay leedahay nafaqo badan oo aad ubaahantahay maalin kasta, waxa ayna ufiicantahay caafimaadka. Waxaa laga yaabaa inaadan jecleyn laakiin waa il muhiim ah oo laga helo feero, folic acid, fatamiin E, Magnesium, fatamiin A, fiber, protein iyo fatamiin C. Awoodda antioxidants ka ku jira awgood fatamiin C, E iyo A waxa ay si gaar ah u anfacayaan maqaarkaaga. Koostada waxaa ku jira antioxidants la dagaallama dhammaan noocyada kala duwan ee waxyeellada maqaarka ku dhaca. Markaad cunto koosto waxaad nadiifineysaa maqaarkaada adigoo kasoo bilaabaya gudaha.